Onye minista njem nlegharị anya nke Seychelles na -eleta obere ụlọ ọrụ La Digue
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Onye minista njem nlegharị anya nke Seychelles na -eleta obere ụlọ ọrụ La Digue
Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
N'ịlaghachi na mgbọrọgwụ ya, onye minista na -ahụ maka ihe ndị si mba ọzọ na njem, Maazị Sylvestre Radegonde, onye Diguois n'onwe ya, ji ụgbọ mmiri gaa agwaetiti La Digue, na -akpọ obere ụlọ ọrụ na mbọ ya na -aga n'ihu ka ọ mara ndị mmekọ njem mpaghara na ngwaahịa ha.
Ndị nwe ụlọ na La Digue ji otu olu kweta na agwaetiti ahụ na -adịghachi ndụ ka ndị ọbịa ji nwayọọ nwayọọ na -alọta.
Onye ozi Radegonde kwusiri ike mkpa ịchekwa La Digue na ụzọ ndụ ya.
Onye odeakwụkwọ ukwu maka njem nlegharị anya oriakụ Sherin Francis kwupụtara na ụfọdụ obere ụlọ ọrụ ndị a nwere otu ụkpụrụ dịka nnukwu ụlọ oriri na ọ luxuryụ luxuryụ ndị okomoko.
Onye odeakwụkwọ ukwu maka njem nlegharị anya Oriakụ Sherin Francis so ya, minista Radegonde malitere njem ya na La Digue na Tọzdee, Ọgọst 19, 2021, na Lakaz Safran. Nke a sochiri La Digue Self Catering Apartments, Chez Marston, Domaine Les Rochers, Le Nautique Luxury Waterfront Hotel, Tanette's Villa, Fleur de Lys, Auberge De Nadege, Ylang Ylang, Hyde-Tide Apartments wee kwụsị na La Digue Holiday Villas.
The Nleta ndị ozi gara n'ihu n'echi ya na -amalite na Kaz Digwa Self Catering sochiri Pension Fidele, Gregoire Apartments, Pension Hibiscus, Lucy's Guesthouse, Cabane Des Anges, Pension Michel, Le Repaire Boutique Hotel & Restaurant, Chez Marva, La Belle Digue Don wee mechie ya na Belle Amie.
Ndị nwe ụlọ na La Digue ji otu olu kweta na agwaetiti ahụ na -adịghachi ndụ ka ndị ọbịa ji nwayọọ nwayọọ na -alọta. Ọmarịcha agwaetiti ahụ ka na -adọta ọtụtụ ndị njem, ọkachasị ịdị jụụ nke agwaetiti ahụ na ile ọbịa nke ndị mmadụ, na -ahụ onwe ha na -enwe mmetụta nke ọma n'ụlọ.
Ọtụtụ n'ime ndị nwe ụlọ ọrụ a nwere ọtụtụ nchegbu gbasara enweghị ọrụ kwesịrị ntụkwasị obi na itinye ndụ La Digue n'ihe ize ndụ. Ha kwupụtakwara nchegbu ha gbasara ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu nke ndị na -eme njem ụbọchị. N'ihi ọtụtụ ihe gụnyere mbelata ugboro ole ndị ụgbọ mmiri na -abata n'agwaetiti a nke metutara ọnụ ọgụgụ ndị bi na ha, ndị ọbịa ole na ole na -anọ abalị, nke belatara ego ha na -enweta n'àgwàetiti ahụ.
N'inwe ezigbo ọmarịcha creole, La Digue emeela aha maka inye ndị njem ahụmịhe ọdịbendị kachasị, agbanyeghị, imezi ihe egwu egwu ibibi ụfọdụ njiri mara agwaetiti ahụ.
Onye ozi Radegonde kwusiri ike mkpa ọ dị ịchekwa La Digue na ụzọ ndụ ya: “Diguois enweghị ike ịlanarị ndị njem ụbọchị, ọ dị anyị mkpa ịghọta ihe kpatara ndị ọbịa a anaghị arahụ. Anyị kwesịrị inye ndị ọbịa anyị ihe ha ga -anọ, ọ bụ ya mere anyị ga -eji gbasaa ngwaahịa anyị ma tụgharịa ihe omume ọdịnala anyị. Agbanyeghị na La Digue bụ otu n'ime ebe ole na ole fọdụrụ na Seychelles nke jisiri ike jigide ụzọ ndụ mmadụ, anyị kwesịrị ijide n'aka na ọ ga -adị ndụ. ”
Ọ gbakwụnyere, sị: “Obere ụlọ ọrụ a na -elebara nkọwa anya, na -enye ndị ọbịa anyị ezigbo ya Ahụmahụ Seychelles, ọ bụ ya mere ha ji achọ nkwado anyị nke ukwuu. Anyị ga -enyocha echiche ọhụrụ nke ga -agba ndị ọbịa ume imefu ma nyere aka na ụlọ ọrụ ndị a meziwanye ụzọ ahịa ha. ”
PS Francis kwupụtara afọ ojuju ya n'ịdị mma ngwaahịa dị na La Digue, “Ụfọdụ n'ime obere ụlọ ọrụ ndị a nwere otu ụkpụrụ dịka nnukwu ụlọ oriri okomoko; sara mbara nke ukwuu ma chọọ ya mma nke na -enye ndị ọbịa anyị mmetụta dị egwu mgbe ha na -enwe ọmarịcha mmụọ. "
Onye ozi Radegonde kelekwara ndị Diguois maka mmelite dị mma n'àgwàetiti ahụ. Ọ chọpụtala na enwere ezigbo nguzobe nke ngwaahịa n'ihe gbasara ebe obibi yana nlekọta siri ike yana mbọ etinye n'ime ngwaahịa ndị a. Agbanyeghị, ọ kwetara ihe ịma aka ha na otu ha ga -esi tụgharịa uche ha n'ahịa ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ Europe wee banye n'ahịa, dị ka Eastern Europe na UAE, nke gosipụtara nnukwu ikike n'oge ọrịa a.
Nleta ndị a bụ akụkụ nke ozi Minista Radegonde na -aga n'ihu iji wulite mmekọrịta siri ike na ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya na mpaghara wee gboo mkpa ndị a ma ama.